လယ်/ဆည် ဝန်ကြီး လွှတ်တော် အမတ်များကို တောင်းပန်
HotNews ဂျာနယ်သို့ပြောကြားခဲ့သော စကားရပ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ ခွင့်လွှတ်ပေးရန် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်က ယနေ့ နေ့လည် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အမတ်ရှေ့ ၌ တောင်းပန်ခဲ့ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
HotNews ဂျာနယ်သည် ၎င်းနှင့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချိန်က သားသမီးသဖွယ်၊ မိသားစု သဖွယ် ပြောကြားခဲ့သည့် ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
လွှတ်တော် အခွင့်ရေးပူးပေါင်း ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များရှေ့ တွင် ယင်းအင်တာဗျူးအသံဖိုင်နှင့် တကွ ပြောကြားခဲ့သည့် စကားရပ်များအား အသေးစိတ်ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပြီးကြောင်း ၎င်းက လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/30/20120အကြံပြုခြင်း
အမေစုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ(30 Apr 2012)
Published on 30 Apr 2012 by BurmaVJMedia
မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ မဟာမိတ်တွေရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ လွှတ်တော် စတင်တက်ရောက် တော့မယ်လို့ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီကနေ့ အဖွဲ့ချုပ် ရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပါတီမှတ်ပုံတင် ဥပဒေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ စာသားတွေကို ညှိနှိုင်းခဲ့စဉ်က ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရမယ့် စာသားကို တစ်ပါတည်း မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာဟာ သူရဲ့ လစ်ဟင်းမှု ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၀န်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံး လာမယ့် မေလ ၂ ရက်နေ့ လွှတ်တော်တက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကို ထောက်ခံတဲ့ ဒီကေဘီအေ
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ် မြို့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရုံးခန်းသစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဧပြီလ ၂၈ နေ့ က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးတင်ဦး နှင့် ကရင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခမ်းအနားတွင် ဒီကေဘီအေ ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလှဘွယ် (ဗိုလ် နှုတ်ခမ်းမွှေး) က မိမိတို့ ရဲ့ တပ်ဖွဲ့ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကို အမြဲထောက်ခံကြောင်း သူရဲ့ သ၀ဏ်လွှာ တွင် ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ဂျာမနီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအမေစုကိုလာတွေ့ ဆုံ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ထပ်တူ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရေရှည် လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ဂျာမနီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ရန်ကုန်မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
— in Rangoon, Yangon, Burma.
Apr 30, 2012 6:30am
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ ဘလော့ခ်ဂါနေဘုန်းလတ်ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာအိုင်စီတီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (MIDO မီဒို) က ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ဒီဗွီဘီ သတင်းထောက် ဦးအံ့ဘုန်းမြတ်က ရန်ကုန်မြို့ကနေ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အန်အယ်ဒီအမတ်များ လွှတ်တော် တက်မယ့်အပေါ် လက်ရှိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရဲ့ သဘောထား အမြင်များ
လွှတ်တော်တွင်းအမတ်များမှ NLD သို့ ပေးစာ
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ဆောက်လုပ်ရေးမှတ်တိုင်မှာ ထမင်းထုတ် အထုပ် 1000 ကျော် အလှူခံအရေးပေါ်လိုအပ်နေ
ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည် ဖုန်း 0943188616 နှင့် 0943089342 သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည် ။
ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဆောက်လုပ်ရေးဝင်း တပ်ပိုင် မြေပေါ်မှာ အိမ်ဆောက်နေတဲ့ မိသားစု 200 ကျော် လူဦးရေ 1000 ကျော်ကို နေအိမ်တွေကနေဖယ်ရှား ဖို့ စစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတွေက စေခိုင်းခဲ့ပါတယ် ။ မိသားစုတွေက ပြောင်းရွှေ့စရာ မရှိတဲ့အတွက် မဖယ်ပေးတဲ့အခါ - တပ်က ခြံစည်းရိုးခတ်လိုက်ပြီး အထဲကလူ အပြင်ဘဲပေးထွက်ပြီး ပြန်မ၀င်ခိုင်းတဲ့အတွက် အတွင်းအပြင် အဆက်အသွယ်ပြတ် စားသောက်ရေးခက်ခဲနေတယ်လို့ ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည် ကဆိုပါတယ် ။
ဖြစ်ပွါးနေတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်သုံးရက်ကစတင်နေတာကြောင့် - ဒီနေ့ နေ့လည်စာ ထမင်းထုပ်ပေါင်း 800 ကျော်ကို အလှူခံရရှိပြီး ကျွေးမွေးထားပြီးပြီလို့ ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်ကဆိုပါတယ် ။
တရားတယ်/ မတရားဘူး - ကြေနပ်တယ်/မကြေနပ်ဘူး ဆိုတဲ့ အငြင်းအခုန်တွေအသာထားပြီး အရေးပေါ် ထမင်းထုပ်ကိစ္စကိုဘဲ ဦးစားပေးစီစဉ်ပေးဖို့ကို အထူးမေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။
အရေးပေါ် ထမင်းထုပ် ကိစ္စ အာရုံစိုက်အားထည့်ပြီးမှသာ မတရားမှုတွေကို ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါရန်
( ကလေးငယ်များ ကလေးလတ်များ စားသောက်ရေး အထူးသတိပြု )
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ အကျဉ်းကျ ရဲဘော် နှစ်ဦးအား နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွဲပြောင်းသည့် အခမ်းအနားကို မော်လမြိုင်မြို့ Strand Hotel တွင် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်း ၃ နာရီက ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဘန်ကီမွန်း ယနေ့နေ့လည် ၁၂ နာရီဝန်းကျင်က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြား
Apr 30, 2012 9:33am
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမူးချူပ်ဘန်ကီမွန်း ဟာ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်နဲ့ဥက္ကဌတွေ နဲ့ တွေ ဆုံပီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ မိန့် ခွန်းပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာ့လွှတ်တော်မှာ ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာ ခေါင်းတစ်ဦးရဲ့ တက်ရောက်မိန့် ခွန်းပြောတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗီဘီ သတင်းထောက်ဦးအံဘုန်းမြတ်က နေပြည်တော်က နေ တိုက်ရိုက် သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။
— at Naypyitaw.
Apr 30, 2012 7:22am
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေပေးဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီကျမ်းကျိန်စာလေးတခု ပြင်ဖို့ကိုတောင် မလွယ်ဘူးဆိုရင်
‎"အခုလို ဒီကျမ်းကျိန်စာလေးတခု ပြင်ဖို့ကိုတောင် မလွယ်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အရေးပါတဲ့ အပုဒ်တွေကို ပြင်ဖို့က အတော့ကို မလွယ်ဘူးလို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မြင်ပါတယ်။" (ဦးအေးသာအောင်)
အရင်ကျွန်တော်တို့ ကြားနေရတာက လွှတ်တော်တွင်းက တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အစိုးရပိုင်းက တာဝန်ရှိသူများက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို
ပြင်သင့်တယ်။ ပြင်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ ပြင်ဖို့ လိုတဲ့အချိန်မှာ ပြင်ရမယ်လို့
ပြောတဲ့ အသံတွေ ကြားတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဒါ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ကို ပြင်ရမယ်။ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံနဲ့လည်း မကိုက်ညီဘူး။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားများရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ဖော်ဆောင်ဖို့ အတွက်လည်း ဒီဖွဲ့စည်းပုံဟာ အဟန့်အတား ဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုသာဆိုရင် တကယ်တန်း ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲဖို့ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်ဖို့လည်း မလွယ်ဘူး။
အခုလို ဒီကျမ်းကျိန်စာလေးတခု ပြင်ဖို့ကိုတောင် မလွယ်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အရေးပါတဲ့ အပုဒ်တွေကို ပြင်ဖို့က အတော့ကို မလွယ်ဘူးလို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မြင်ပါတယ်။"
မြန်မာ -ီး က ပိုနံလို့လား
============== Myanmar Travel & Tours (MTT) မှာ တွေ့လိုက်ရတာဗျာ ....
ရင်ထဲမှာ အောင့်သွားတယ် ..... သြော် ငါတို့ မြန်မာတွေ တောင်အာဖရိက
မှာလို အမဲတွေ ဖြစ်တော့မှာပါလားလို့ .......
MTT - 122 Maha Bandoola Road, Kyanktada Tsp., Ygn.
Tel: 371286, 252859.
အစိုးရဌာနဖြစ်ပြီး ဒီလို ပြုမူရလား .... ကုမ္ပဏီဆိုရင် ထားလိုက် .... ရှယ်ပေးကြဗျာ .... အရမ်းတင်းတယ်
"စာသားတွေ ပြင်ဖို့ (သမ္မတကြီးနဲ့) ပြောတုန်းက ကျမ်းကျိန်စာသားကို ကိုင်တွယ်ဖို့
ကျွန်မအနေနဲ့ လစ်ဟင်းခဲ့ပါတယ်၊ ဒါကို ကျွန်မ တာဝန်ယူတယ်။"
__ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၃၀ ဧပြီလ ၂၀၁၂)
Apr 30, 2012 6:39am
30Apr 2012 mon အဖွဲ့ ချုပ် လွတ်တော်တက်မည်ဟု ယနေ့ ဆုံးဖြတ်။
by Ko Htoo on Monday, April 30, 2012 at 4:31pm ·
ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိသည့်အလုပ်သမားအမျိုးသမီးငယ်အထည်ချုပ်ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများက လျစ်လျူရှုထား
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပေါက်ကံ စက်မှုဇုန်ရှိတရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်ကုမဏီ ADK အထည်ချုပ်စက်ရုံ ဖယ်ရီကား တိမ်းမှောက်ရာတွင် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိသည့် အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် အလုပ်သမားအမျိုးသမီးငယ်၏ လွန်စွာဆိုးရွားနေသောကျန်းမာရေး< အဆိုပါအထည်ချုပ်ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများက လျစ်လျူရှုထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကုမ္ပဏီမှ အရှည် ၁၄ပေရှိ စက်ရုံဖယ်ရီကားကို မောင်းနှင်သည့် ဒရိုင်ဘာကိုကျော်မင်းဆိုသူမှာ ကားပေါ်တွင် အရက်ပုလင်းများတင်ပြီး အခြားအပေါင်းအသင်း အမျိုးအသား သုံး လေးယောက်ကိုပါ ဖယ်ရီကားပေါ်သို့ခေါ်တင်ကာမောင်းနှင်စဉ် ရှေ့မှ ကွန်တိန်နာယာဉ်ကို ၀င်တိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်။ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ယာဉ်ပေါ်ပါ စက်ရုံအလုပ်သမားများ ၂၃ ဦးခန့် အနက်မှကိုယ်ဝန် ငါးလရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအပါအ၀င် စုစုပေါင်း လေးဦးမှာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ပြီး ကျန်သူများမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒဏ်ရာရရှိသူများအနက် အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် မဝေေ၀လင်း ခေါ် မသူဇာလင်းမှာပြင်းထန်သောဒဏ်ရာများကို ရရှိပြီး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာ(စိုးရိမ်ရ) အဖြစ် ဆေးကုသမှုကို ခံယူလျက်ရှိသည်။“ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ကတည်းက ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ဝေေ၀လင်းတစ်ယောက်ကိုပဲ
တင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုတော့ နီးစပ်ရာ အင်းစိန်ဆေးရုံမှာပဲ ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ ဝေေ၀လင်းရဲ့အစ်မ အသက် ၂၉နှစ်အရွယ် မသန္တာလင်းကတော့အင်းစိန်ဆေးရုံကြီးမှာ သားအိမ်ကို ထုတ်လိုက်ရပါတယ်။ အခုတော့နားနေရတဲ့အနေအထားမှာပဲ ရှိပါတယ်။ လမ်းတောင်မလျှောက်နိုင်သေးပါဘူး(မိသားစုဝင်ကပြောစကား)“ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ရက်မှာပဲ စက်ရုံက ဆေးဖိုး ၃၅၀၀၀၀
တစ်ကြိမ်၊ ၉၇၀၀၀ တစ်ကြိမ် ရတယ်။ အဲဒါပြီးတော့ စက်ရုံက ၀န်ထမ်းတွေစုပေးတဲ့ငွေဆိုပြီးတော့ ၁၅၀၀၀၀ ရတယ်။ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ စက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူက ဆေးဖိုး ၂၀၀၀၀ ပေးတယ်။ အလုပ်သမားတွေက ပေးတဲ့ငွေဆိုပြီး ၇၀၀၀၀တစ်ခါရတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းကတည်းက စက်ရုံက ဒီလူနာကို တစ်ယောက်မှလာမကြည့်ကြတော့ပါဘူး
၂၅-၄-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှာတော့ စက်ရုံမန်နေဂျာဒေါ်စန္ဒာထွန်းနဲ့ နောက်နှစ်ယောက်ကလာပြီး ဆေးဖိုးပိုက်ဆံပေးဖို့လုပ်ပါတယ်။ လူကြီးတွေလည်း မရှိသေးတာနဲ့ မယူလိုက်ပါဘူး”
“ကျွန်တော်တို့ က လည်း သိတာ နောက်ကျတယ် ။ တိုင်းရင်သားရေးရာ ၀န်ကြီးကိုပြောပြီး နောက်နေ့မှာပဲ စက်ရုံက လာသွားတယ်လို့ သိရတယ်၊ ကျွန်တော်တုိ့လည်းမရှိတာနဲ့ လူနာရှင်ကလည်း သိပ်နားမလည်တော့ ပိုက်ဆံထုတ်လိုက်ပေးတာကိုမယူလိုက်တာဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံပိုင်ရှင်ဆီကိုထိ သွားဖို့လုပ်နေကြတယ်။ လူနာအခြေအနေက သိပ်မကောင်းဘူး။ တကိုယ်လုံး စုတ်ပြတ်နေတာပဲ”(ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူ တစ်ဦး)
လူနာ မဝေေ၀လင်းမှာ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းကွဲ၊ အဆုတ် အသည်းများကို ထိခိုက်ကာ သရက်ရွက် စုတ်သွားပြီ၊ ဆီးအိမ်ကွဲသွားကြောင်း၊ယင်းနောက် အူပိတ်ကာ တင်ပဆုံရိုးဒဏ်ရာနှင့် လက်ဝဲလက်မောင်းကျိုးခြင်း ဒဏ်ရာတို့ကိုရကာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ICU တွင် အထူးဂရုစိုက်ကုသနေရကြောင်း သိရသည်။ ယခုအခါ ၀မ်းဗိုက်ကို သုံးကြိမ်တိတိ ခွဲပြီးကုသပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း လူနာရှင်များမှာ နယ်မှဖြစ်သည်ကတစ်ကြောင်း၊ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည်ကတစ်ကြောင်းကြောင့် ဆေးဖိုးဝါးခများအခက်အခဲတွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖယ်ရီယာဉ်သည် လှော်ကား ၀ါးတရာအနီး လိပ်ကုန်းရွာတွင်နေထိုင်သောဦးမြင့်ဆွေပိုင် ယာဉ်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်မောင်းသူမှာ ဦးမြင့်ဆွေ၏သားဖြစ်ကာယခုအခါ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
အမှုကို အင်းစိန်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ်ဝင်းဌေးမှ တရားလိုပြုကာ ပုဒ်မ ၃၀၄ (က) /၃၃၈/၃၃၇/၂၇၉/၂၀၂တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/28/20120အကြံပြုခြင်း
သောကြာ, 27 ဧပြီ 2012
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ကျဆင်းနေတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးကို အကူအညီပေးဖို့ အဆင့်သင့်ရှိကြောင်း အာရှဖွံဖြိုးရေးဘဏ် ADB ဥက္ကဋ္ဌ Haruhiko Kuroda က မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက ADB အပေါ် အကြွေးတင်နေတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ နီးပါးကို လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ မဖြစ်မနေ ပြန်ဆပ်မှသာ နောက်ထပ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကူအညီအသစ်တွေကို ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။ ဒီလိုအကြွေးပေးဆပ်နိုင်ဖို့ အတွက်လည်း ADB ဟာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ အပြုသဘောဆောင် ဆက်ဆံသွားမယ်လို့ Mr. Kuroda က ပြောပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်း သူကဆိုပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့လူဦးရေ စာရင်းအရဆိုရင် မြန်မာပြည်ဟာ အဆင့်လေးမှာရှိနေပြီး အလုပ်သမားဦးရေ အများအပြားရှိနေတာကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းတွေအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သဘာဝ သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝပြီး သဘာဝရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေ ထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ADB ဥက္ကဋ္ဌ က ပြောသွားပါတယ်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | သောကြာနေ့၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ADB သို့ မြန်မာအစိုးရ ဆပ်ရန်ရှိသည့် ကြွေးငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၄၉ဝ ပြန်လည်ပေးဆပ်ပြီးမှသာ နောက်ထပ် ငွေကြေးအကူအညီများ ပေးနိုင်မည်ဟုဆိုသည်။ အကူအညီများ ပြန်လည်စတင်ပေးရန်အတွက် စုပြုံသော အကြွေးများမှာ “အတားအဆီးကြီး”တခု ဖြစ်နေကြောင်း ADB ဥက္ကဋ္ဌ Haruhiko Kuroda က ပြောသည်။ “ကျနော် အထူးပြုပြောလိုတာကတော့ အများနဲ့ချုပ်ဆိုရတဲ့ စာချုပ်တွေဖြစ်နေတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ သိပ်ပြီး ပျော့ပြောင်းလို့ မရပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် စတုတ္ထ လူဦးရေအများဆုံး တိုင်းပြည်ဖြစ်သည့်အလျောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အတွက် လုပ်သားအလားအလာ ကြီးမားလှပြီး မဖော်ထုတ်ရသေးသည့် သဘာဝ သယံဇာတများ ရှိနေသည်ဟုလည်း မစ္စတာ ကူရိုဒါ က ပြောသည်။ ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ အတိုးနည်းချေးငွေနှင့် ထောက်ပံ့ကြေးများ ပေးလာခဲ့သော ADB အား မူလ စတင် တည်ထောင်သည့် ၁၉၆၆ ခုနှစ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ လူထုအုံကြွမှုအား စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့သည့်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ADB ကူညီမှုများ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သည်။ သို့သော် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် ၎င်းတို့ဘဏ်အနေဖြင့် မြန်မာအစိုးရနှင့် “အပြုသဘော ဆက်ဆံ”ရန် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း မစ္စတာ ကူရိုဒါ က ပြောဆိုသွားကြောင်း သြစတြေးလျ ABC သတင်းတရပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော် အဆက်ဖြတ်ထားခဲ့သော ကမ္ဘာ့ဘဏ်အနေနှင့်လည်း အကူအညီများ ပြန်လည် ပေးအပ်နိုင်ရန် အတွက် ဘဏ်ရုံးခွဲတခု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လာရောက် ဖွင့်လှစ်တော့မည် ဖြစ်သည်။ ဇွန်လအတွင်း ဖွင့်လှစ်ရန်ရှိသည့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရုံးအနေဖြင့် လက်ရှိ အကြွေးများကို စီစစ်သွားကာ တိကျမှန်ကန်သည့် စီးပွားရေးအချက်အလက်များကို ရယူသွားမည်ဟု ဆိုသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အား ပေးရန်ရှိသည့်အကြွေးမှာလည်း ဒေါ်လာ ၃၉၃ သန်း ရှိနေသည်မှာ ၁၉၈ဝ စုနှစ်များကတည်းက ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ် အရှေ့အာရှ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ Pamela Cox က ပြောကြောင်း ရိုက်တာသတင်းတရပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိ သည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့် ဆက်ဆံရေးအတွက် ဘဏ်၏ဘုတ်အဖွဲ့၊ ရှယ်ယာရှင်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊ တွဲဖက်အဖွဲ့များအပြင် မြန်မာအစိုးရနှင့်ပါ နီးကပ်စွာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း မစ္စကောက်က်စ် က ဆိုသည်။ “ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေဟာ အကဲဆတ်သေးတယ်ဆိုတာ ကျမတို့ သတိပြုမိပါတယ်။ စွန့်စားရမယ့်ဟာတွေလည်း သိထားပါတယ်။ ကျမတို့နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး တိုးတက်မြန်ဆန်မှုဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ ဘယ်လောက်ထိ ထိန်းထားနိုင်မလဲ ဆိုတာအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်” ဟု ပြောဆိုသွားသည်။
2012-04-27 ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေကို တိုင်းရင်းသားနဲ့ ဒီမိုကရေစီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကိုယ်စား ရခိုင်အမျိုးသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်က လာမဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ သွားရောက် တွေ့ဆုံမယ်လို့ သိရပါတယ်။
RFA ရခိုင်အမျိုးသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်ဖြစ်ပါသည်။ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်တွင်း အမြန်ဆုံး ပါဝင်လာရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ အနေနဲ့ အခုလို သွားရောက်တွေ့ဆုံဖို့ စီစဉ် တာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောပါတယ်။
ရွှေနံသာလယ်သမားများအရေး ဘယ်သူတွေ ၀င်ရှင်းပေးမလဲ
by Naung Taw Lay on Saturday, April 28, 2012 at 1:44am ·
ရွှေနံသာကျေးရွာက လယ်သမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လယ်ယာမြေထဲမှာ ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီက ဖျက်စီးနေတာတွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ၂၇.၂.၂၀၁၂ ရက်နေ့က လိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။ ယခင်နှစ်ကလည်း စပါးစိုက်ချိန်မှာ လယ်ကန် သင်းတွေ ဖျက်စီးခံရလို့ ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ရကြောင်း၊ ယခုအခါမှာလည်း ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီက ဖျက်စီးလို့ လယ်ကန်သင်းတွေ မရှိသလောက် ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း သက်သေသက်ကာယအနေနဲ့ လိုက်လံပြသရာ မှာ ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီပိုင် ဘူဒိုဇာနှစ်စီးဟာ အပြိုင်အဆိုင် လယ်ကန်သင်းများကို ဖြိုဖျက်နေတာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရ ပါတယ်။
လယ်သမားကြီး ဦးလန်ချားရဲ့ လယ်ယာမြေထဲမှာ ဘူဒိုဇာတစ်စီး ဖုန်တထောင်းထောင်းနဲ့ လယ်ကန်သင်းတွေ ကိုဖြိုဖျက်စီးနေတာကို မြင်တဲ့အတွက် လယ်သမားတွေနဲ့ အတူ လိုက်သွားစဉ်မှာ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ တခြားတစ်ဖက်ကို လှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဘူဒိုဇာတစ်စီးဟာ ဦးချစ်ဝင်းစိန်ရဲ့ လယ်ယာမြေအတွင်းမှာ လယ်ကန်သင်းရိုးတွေကို ဖျက်စီးနေတာ မြင်တွေ့ရလို့ ကားနဲ့ထပ်မံသွားရောက် ရာမှာလည်း လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုကို ရပ်နားလိုက်ပြန်ပါတယ်။
လယ်သမားကြီး ဦးကျော်စိန် ပြောပြတာကတော့`ဒါက ဦးချစ်ဝင်းစိန်လယ်တွေ။ လယ်တွေက ဘောလုံးကွင်း လိုဖြစ်နေပြီ။ လယ်သမားတွေက ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲ။ ဇေကမ္ဘာကလယ်သမားကို ဒုက္ခပေးနေတာ။ အခုထိုးနေတာက ဦးချစ်ဝင်းစိန်လယ်အားလုံး။ မနှစ်ကလည်း တစ်ခါထိုးဖျက်လိုက်ပြီးပြီ။ ဒီနှစ်တစ်ခါ ပြန်ဖျက် နေပြန်တာ။ လယ်သမားတွေက ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကို ပြန်ပြင်ထားတာ။ ဟိုမှာလည်း ခုနထိုးနေတယ်။ ဒီမှာလည်း ထိုးနေတယ်။ အခုပဲစက်လိုက်တာ မြင်လား။ ဒီကားလာတာတွေ့လို့ သူတို့ရပ်လိုက်တာ´လို့ပြောပါတယ်။
လိုက်ပါလာသူ တစ်ဦးရှင်းပြတာကတော့ `ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ SB၊ စအဖ တွေကသွားရပ်ခိုင်း လိုက်လို့ ရပ်သွားတာ။ လယ်သမားတွေရဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကို အကူအညီပေးရင်းနဲ့လာတာ။ လာတဲ့နေရာမှာ SB တွေ စအဖတွေ ဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်လာတယ်။ လိုက်လာပြီးတော့ ဒီလယ်ကွင်းထဲမှာဒီစက်တွေကို သူတို့မောင်း နေတယ်။ မောင်းနေတာကို ကျွန်တော်တို့ကို ကျော်လာပြီး သွားရပ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက် ဒီဘက်ကိုလာတဲ့ အချိန်မှာဒီစက်က ရပ်သွားတယ်။ ဟိုဘက်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာ ဟိုဘက်က ရပ်သွားတယ်။´ လို့ပြောပြပါတယ်။
ဦးလန်ချားရဲ့ လယ်တွေဘက်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ ထပ်မံသွားရောက်ရာမှာတော့ တစ်ဖက်က စကားပြောစက်နဲ့ လှမ်း ပြောပေးနေတဲ့အတွက် ရောက်သွားချိန်မှာပဲ စက်ကို နားခိုတဲနားပြန်ကပ်ပြီး ရပ်ထားလိုက်တာကို မြင်တွေ့လိုက်ရပြန်ပါတယ်။ လယ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ဦးလန်ချားရဲ့ ခံစားချက်ကို မေးမြန်းကြည့်ရာမှာတော့ `နိုင်ငံ တော်က စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံ၍ ဆိုတာကိုနေ့တိုင်းကြေညာတယ်။ ကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်နေတာ။ သူတို့ကဘာမှ ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ဘူး။ ဟုတ်ပလား။´လို့ပြောပါတယ်။ ဦးလေးတေို့ နောက်ဆုံး အဆင့် ဘယ်လိုဆက်လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားသလဲလို့ မေးမြန်းရာမှာတော့`ဒီနေ့ပါဆို (၂၇.၄.၂၀၁၂) လေးရက်ရှိပြီ။ ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တော့ဘူးလေ။ ဘယ်သူမှ ဖြေရှင်း မပေးဘူးဆိုရင်တော့ လူစုပြီးရိုက်ကြဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ လယ်မလုပ်ရ၊ ထမင်းငတ်မယ့်အတူတူတော့ ရိုက်ကြ မယ်ပေါ့´လို့ မွန်သံဝဲ၀ဲနဲ့ ပြောပါတယ်။
လယ်သမားတွေကတော့ လယ်တွေထဲမှာ မြေသြဇာအဖြစ် နွားခြေးခြောက်တွေ ချထားတာကိုလည်း တွေ့ရ ပါတယ်။ တင်ပြချထားတွေကို အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီအထိကြာနေစရာ မလိုဘူး။ ပထမ ပြောထားတာ နိုင်ငံတော်က သိမ်းမယ်ဆိုတာ ဦးလေးတို့ဘာမှ ပြောစရာမရှိဘူး။ လယ်သမားတွေကို ခြိမ်းခြောက်ပြီးတော့ အတင်းအဓမ္မ လက်ဝါးကြီးအုပ်ကြီးဆိုးတာကို လယ်သမားတွေ ခံနေရတယ်။ အခုတော့ လွှတ်တော်မှာလည်း ပြောနေတာပဲ။ ငွေများတရားနိုင်တဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကို လွှတ်တော်မှာလည်း ပြောနေတာပဲ´လို့ လယ်သမားတွေက ရင်နာနာနဲ့ ပြောဆိုလာပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ရုံး ဖွင့်ပွဲအမေစုဖဲကြိုးဖြတ်
မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အရှိန်အဟုန်တွေ ပိုပြီးခိုင်မာဖို့နဲ့ ပိုပြီးမြန်ဆန်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့ထားတာကို ဆိုင်းငံ့လိုက်တာဖြစ်ကြောင်း အီးယူ နိုင်ငံခြားရေးရာ အကြီးအကဲ Catherine Ashton က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးမှာ ဒီကနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ခင်မှာ အီးယူ အကြီးအကဲနဲ့ အဖွဲ့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အဖွဲ့ကို NLD ရုံးချုပ် အစည်းအဝေး ခန်းမမှာတွှေဆုံဆွေးနွေးပါတယ်။
Ms Ashton ရဲ့ ဒီခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားရှိတဲ့ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုကို ဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အီးယူကအဆင့်အမြင့်ဆုံး တာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ ပထမဆုံး ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
သူ က အင်းလျားမြိုင်လမ်းမှာ ရှိတဲ့ အီးယူ ရုံးခန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေတို့နဲ့ အတူ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးပါတယ်။
တနင်္လာနေ့ထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့လည်း တွှေဆုံဖို့ ရှိပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂမှ မူဝါဒ အကြီးအကဲ တွေ့ဆုံ.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ မူဝါဒအကြီးအကဲ မစ္စစ် ကတ်သရင်း အစတန် တို့ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ မူဝါဒအကြီးအကဲ (ကတ်သရင်း အစတန်) Chief of EUForeign Policy, Ms. Catherine Ashton တို့ဟာ ဒီကနေ့မနက် ၁၀:၃၀ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တစ်ခု ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
The Voice Weekly)ဥရောပ သမဂ္ဂ အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ ယူရို သန်း ၁၅၀ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍတွင် အဓိကထား အကူအညီ ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော ဥရောပသမဂ္ဂမှ မူဝါဒ အကြီးအကဲ ကတ်သရင်း အဲရ်ှတန်က ပြောကြားလိုက်သည်။ ရန်ကုန်မြို့တော် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရုံးချုပ်၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပူးတွဲ ပြုလုပ်သော ယနေ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ထိုသို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အန်အယ်ဒီအမတ်များ လွှ...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ဆောက်လုပ်ရေးမှတ်တိုင်မှာ ထမင်းထု...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ပြန်...
ဘန်ကီမွန်း ယနေ့နေ့လည် ၁၂ နာရီဝန်းကျင်က ပြည်ထောင်စု...
The Voice Weekly ဂျာနယ်ပါ အိမ်အကူသတင်းနှင့် သတင်းစ...
RNDP ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင် NLD ခေါင်းဆောင်တွေကို သွ...
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ရုံး ဖွင့်ပွဲအေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂမှ မူဝါဒ အကြီးအကဲ...